Ukukhwabanisa Okujwayelekile Okuvamile Kakhulu Ama-Buddhatrends
Ingabe ijezi elide noma ingubo emifushane yengubo? Kuphuma kuwe! Gqoka ngezibani ezithile namabhodlela amnyama amnyama ukuze uthole izingubo zokugqoka ngeso lengqondo ebusuku. Noma ubhanqa lesi sifo esingaphezulu kwesigqoko nge-jeans enesigqoko namabhodlela ezinyawo ukuze uthole i-chic vibe ekhethiwe ngesikhathi esilandelayo esijabulisayo. Kufudumele futhi kukhululekile, kuphelele nje ubusuku obupholile obusasa bokukhwabanisa. Esinye sezici zami eziyintandokazi zalesi sifo esingaphezulu kakhulu yizikhwama ezinkulu zokuthwala lezozinto ezincane njengezihluthulelo ne-glo gloss uma usendaweni. Ungathembela uzizwe ukhululekile futhi ukhululekile kanye nemfashini esikhwameni sethu eside esingasese sleeve. Noma kunini, noma yikuphi phezulu. Itholakala ngokuhlanganisa nosayizi.
Le ngubo emnandi yokugqoka iyatholakala ku-Black, Red Wine neNavy.
Ubukhulu: Okuncane, Okuphakathi, Okukhulu, i-XL, i-2X, i-3X, i-4X ne-5X